Baaskiilka iyo ATV Vin Decoder
Si aad u aqrisan tirada VIN ah mooto ugu horreeya ee aad u baahan doontaa in la helo tirada VIN ah. Tirada VIN ayaa gaar u tahay in hal mooto gaar ah oo dhab ah laba jirin waa isku mid.
Hubi Vin Number Halkan
By kelmadaha tirada VIN ku saabsan baaskiil kasta ama ATV, waxaad baran kartaa wax badan oo ku saabsan baaskiil, such as who the manufacturer is and the country it was manufactured. Waxay inta badan waa seddex xarfaha iyo lambarada hore saxan VIN ah.
Midda afraad dhex lambar siddeedaadna waxaa loola jeedaa gaarka ah oo ku saabsan baaskiil sida style jirka iyo nooca engine. Gartaan qalabka intooda badan waxay leeyihiin macluumaad la heli karaa, laakiin mararka qaarkood waxaad yeelan doontaa inaad la xiriirto soo saaraha si aad u hesho macluumaadka oo dhan.
Lambar sagaalaad waxa la dhigayaa baaskiil ujeeddooyin xaqiijin iyo ballan-qaadayaa in VIN waa dhab.
Lambar tobnaad waa sannad ah in gaariga la soo saaray. A dhex Y waa sida baabuurta oo tilmaamaya sano ka 1980 si ay u 2000. Laga soo bilaabo 2001 si ay u 2009 lambar noqon doonaa 1 iyada oo loo marayo 9 oo u dhiganta sanad in. Laga soo bilaabo 2010 ay xarfuhu mar kale ka 1980 si ay u 2000.
Si aad u hesho mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Yamaha, Kawasaki, Suzuki Baaskiiladaha iyo Harley Davidson Vin gartaan qalabka soco in goobta.
Baaskiiladaha Vin Hubi oo ATV Vin Check